दुई वर्षमै 'एमजी' ले बेच्यो ७ सय बिजुली गाडी, नयाँ मोडल कहिले आउँछ? :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
दुई वर्षमै 'एमजी' ले बेच्यो ७ सय बिजुली गाडी, नयाँ मोडल कहिले आउँछ?
मोरिस ग्यारेज, छोटकरीमा 'एमजी' का बिजुली गाडी नेपालमा पाइन थालेको दुई वर्ष मात्र भयो। एमजीको आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सले यी दुई वर्षमा सात सयभन्दा बिजुली गाडी बेचिसकेको छ।
पारामाउन्ट मोटर्सकी मार्केटिङ एवम् सञ्चार अधिकारी मनिता नेम्बाङका अनुसार एमजीको 'जेडएस' बिजुली गाडीले छोटो अवधिमै उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको हो।
'झन्डै दुई वर्षमा यति धेरै मात्रामा विद्युतीय गाडी बिक्री हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो,' उनले भनिन्, 'विद्युतीय गाडीप्रति ग्राहकको रूचि र चासो बढिरहेको पाएका छौं। अहिले त गाडीको स्टक नै सकिएको छ। बुकिङ पनि रोकेका छौं।'
पछिल्लो समय संसारभर सवारीसाधन निर्माणमा चिप अभावको समस्या छ। मागअनुसार गाडीहरू आपूर्ति हुन सकेका छैनन्। त्यसकारण पारामाउन्टले पनि असोजदेखि जेडएसको बुकिङ बन्द गरेको उनले जानकारी दिइन्।
'गाडीबारे सोधपुछ भने उत्तिकै आइरहेको छ,' उनी भन्छिन्।
जेडएस बिजुली गाडी पहिलोपटक २०७६ साल मंसिरमा भित्रिएको थियो। कम्पनीले यसको सुरूआती मूल्य ५० लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकेको छ।
११० किलोवाटको मोटर र ४४ किलोवाट ब्याट्री भएको जेडएसले अधिकतम ११० किलोवाट पावर र ३५० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ। कम्पनीका अनुसार एकपटकको पूरा चार्जमा ४२८ किलोमिटरसम्म कुद्छ। गाडीमा भएको लिथियम आयन ब्याट्री छ जुन आधा घन्टामा ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन्छ। कम्पनीले ब्याट्रीमा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरको वारेन्टी दिएको मनिताले जानकारी दिइन्।
बिजुली गाडी जेडएसबाहेक पारामाउन्टले एमजीका पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने हेक्टर, एचएस, जिएस र जेडएस गरी ५ मोडलका गाडी बेचिरहेको छ।
पारामाउन्टले २०७५ साल भदौदेखि एमजी गाडी भित्र्याएको हो। हामीकहाँ पाइने हेक्टर मोडल भारतमा उत्पादित हो भने अरू सबै चीनमा बनेका हुन्।
'यही कारण सुरूका दिनमा धेरै ग्राहकलाई एमजी चिनियाँ गाडी हो कि भन्ने लाग्थ्यो। तर यो बेलायतकै एमजी प्रविधि र मापदण्डमा आधारित छ। अचेल विस्तारै ग्राहकले बुझ्दै हुनुहुन्छ,' मनिताले भनिन्, 'यसको डिजाइन पनि बेलायती नै हो। एमजी गाडी गुड्दैछ भने प्रायःले फर्केर हेर्छन्। एमजीको प्रमुख विशेषता यो पनि हो।'
९० वर्षभन्दा पुरानो बेलायती ब्रान्ड एमजी अहिले चिनियाँ कम्पनी साइक मोटरको स्वामित्वमा छ। हाल एमजी गाडी चीन, भारत र थाइल्यान्डमा उत्पादन हुन्छन्। यिनै देशबाट संसारभर निर्यात हुँदैछ।
पारामाउन्टले पनि नेपाली ग्राहकको माग र चासो प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ मोडल ल्याइरहेको मनिताले जानकारी दिइन्।
एमजीका सबैभन्दा बढी बिक्ने मोडलमध्ये जेडएस (विद्युतीय), एएचएस र हेक्टर हुन्। पारामाउन्टले गत मंसिर तेस्रो साता मात्रै नयाँ हेक्टर सार्वजनिक गरेको छ। पाँच सिट भएको नयाँ हेक्टर १.५ लिटर पेट्रोल हाइब्रिड र पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ। यसको सुरूआती मूल्य ५९ लाख ९९ हजार हो। एमजी गाडी २० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा किन्न सकिन्छ।
'नेपालमा सबभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने नै एमजी हो,' मनिता दाबी गर्छिन्, 'जेडएस विद्युतीय गाडीको स्टार हो।'
एमजीको सबभन्दा कम मूल्य पर्ने गाडी पनि यही हो। केही समयअघिसम्म सस्तोमा एमजी थ्री मोडल पाइन्थ्यो जसको बिक्री हाल भने रोकिएको छ। एमजीले अहिले ५० लाखदेखि ९० लाख रूपैयाँसम्मका गाडी बेचिरहेको छ।
पोखरा, बुटवल, जनकपुर, बिर्तामोड, विराटनगर र झापा गरी ६ ठाउँमा एमजीका डिलर एवम् शोरूम छन्। कम्पनीले अरू मुख्य सहरमा पनि डिलर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
पारामाउन्टले आफूले बेच्ने एमजी बिजुली गाडी चार्ज गर्न अहिलेसम्म ११ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको छ। अबको एक वर्षमा संख्या बढाएर २० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन पुर्‍याउने योजना रहेको मनिताले जानकारी दिइन्।
योसँगै पारामाउन्टले तीन महिनाभित्र एमजीले जेडएस बिजुली गाडीको नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्न लागेको छ। सार्वजनिक गरेलगत्तै यसको बुकिङ खुला हुनेछ। सन् २०२१ मा ५ सयभन्दा बढी गाडी बेचेको एमजीले सन् २०२२ मा हजारभन्दा बढी बेच्ने लक्ष्य राखेको छ।
मनिताका अनुसार बिजुली गाडीहरू प्रत्येक तीनदेखि छ महिना वा पाँच हजार किलोमिटरदेखि दस हजार किलोमिटरबीच सर्भिसिङ गराउनुपर्छ।
'तर धेरै ग्राहकमाझ यसबारे जानकारी कम छ,' उनी भन्छिन्, 'विद्युतीय गाडीलाई सर्भिसिङ पर्दैन भन्ने भ्रम छ। यो गलत हो। निश्चित अवधिपछि जुनसुकै गाडी सर्भिसिङ गराउनुपर्छ।'
त्यस्तै नेपाली बजारमा अझै पनि बिजुली गाडीप्रति धेरै मान्छे सकारात्मक हुन नसकेको उनी बताउँछिन्।
यसका मुख्य दुई कारण देखिन्छन्। एक त हामीकहाँ बत्तीको भर हुन थालेको धेरै भएकै छैन। अहिले पनि विद्युत आपूर्तिबारे गुनासो आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण सुरूमै बिजुली गाडी किन्न आँट्नेहरू कमै हुन्छन्।
अर्को पेट्रोल-डिजेल सवारी चलाइरहेकालाई बिजुली गाडी चलाउन झट्टै बानी नपर्न सक्ने मनिता बताउँछिन्।
'पेट्रोल-डिजेलबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय गाडीको प्रविधि अलग हुन्छ। त्यसैले ग्राहकले विद्युतीय गाडी किन्नुअघि यसको प्रविधि र प्रणाली बुझ्न आवश्यक छ,' उनले भनिन्, 'तर विद्युतीय गाडीको बढ्दो आकर्षणले धेरैलाई यसबारे जानकारी हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ।'
पारामाउन्ट मोटर्सकी मार्केटिङ एवम् सञ्चार अधिकारी मनिता नेम्बाङ
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १९, २०७८, ०४:२५:००